Waayyoo Yaa Carraa Oromoo!Jaafar Alii reebicha irra gaheen hedduu miidhamee jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioWaayyoo Yaa Carraa Oromoo!Jaafar Alii reebicha irra gaheen hedduu miidhamee jira.
Artiistii keenya jaalatamaa fi qaroon sabaa yeroo ammaa oromoo tahuu isaaf du’aa fi jiruu jidduu jiraachuu suuraan nidubbata.
Haacaaluu dhabdee mii? Hundumaa tokko tokkoon dhabuukeeti, dagatan jedhanii jaafar jalqaban.
Wanta Namni kun jedhe lafa hin bu,u.Mark is word. what he forecasted is inevitable.
VOA Interview with
about the protest in Washington DC
(Credit: VOA Amharic)
#Hidhaa fi #Ajjeechaan Kan Nurraa Duaabbatu #MCBO Yoo Ijaaranne Qofaa dha.
#Dr_Husen_Kadir Barsiisaa fi Hayyu Oromoo Oromummaa Isaaniitiin Yakkamuun Shaggarii fi Baale jiddutti hidhamaa turanii dha. Amma akka maatiin jedhanitti eesaa akka jiru hin beekkamu!
Hayyoota keenya ukkaamsuu fi hiraarsuun dhabama irraa sirnicha hin dandamachiisuu daranuu buqqaasa malee.
የጦርንቱ የጉንዮሽ ጉዳት እና ሹም ሽሩ
Faayidaa Mootummaa Ce’umsaa:
Mootummaan Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa hundeeffamuun:
a) Sirna bulchiinsaa abbaa irrummaa paartii tokkoo buqqisuudhaan, sirna paartii danuu fi dimookraatawaa ta’e eenyummaan Oromuummaa, Aadaa fi Afaan Oromoo kan keessatti kabajamu argamsiisuuf.
b) Waligala dirree siyaasaa amma jiru jijjiiruun kan Jaarmooleen siyaasaa danqaa tokkoo malee sagantaa dhaaba isaani barsiisan,uummata ijaaran, waajjira banatan gochuuf.
c) Akkasumas sadarkaa hundaatti Ol’aantummaa Seeraa mirkaneessuun dhibdeelee addaa addaa hawaasichi qabu ilaalchisee Jaarmooleen Siyaasaa mul’ata furmaata addaa addaa qaban dirreen dorgommii siyaasa isaanii eegamee fedhiin ummatni karaa amansiisaa taheen akka filani gochuufidha.
Kanarraa maal hubattu?
Impaayerri Itoophiyaa haala kanaan ijaaramtee turte. Ammas sanuma deebisuuf dhama’aa jiran.